Smoking – Healthy Life Journal
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်လို့ရပါသလဲ ဆရာ။ A. ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ရာနှုန်းပြည့် မကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လည်း ကင်ဆာအားလုံးဖြစ်ပွားမှုရဲ့  ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးမှာ...
——၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- တစ်နေ့ ကျွန်မအလုပ်ကနေ အိမ်ကိုပြန်အရောက်. . ကျွန်မမိခင်က သတင်းတစ်ခုကို ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်ဘေးက ဦးလေးကြီး ဦးတင့်မှာ ခြေထောက်ကို ပေါင်ရင်းနေရာကနေ ဖြတ်ပစ်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ အဲဒီသတင်းကို ကြားပြီးပြီးချင်း ကျွန်မလွန်စွာ အံ့အားလည်းသင့်၊...
Q. ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အဆုတ်လေအောင်းရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဆိုတာ အများကြီး ပြောပြထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေမြဲ...
Q.သူငယ်ချင်းအစ်မကြီးတစ်ယောက်က ဆေးလိပ်သောက်နေတာ ၆ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ သောက်လိုက်ရပ်လိုက်နဲ့ စွဲစွဲမက်မက်မဟုတ်ပေမယ့် သူကအပျော်သဘောမျိုး ဖွာနေတာပါ။ နောက်အပတ်ဆိုရင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သူဆေးသွားစစ်ရတော့မှာမို့ သူအရမ်းလန့်နေတယ်။ x-ray ရိုက်ရင်ပေါ်မလား ဒါမှမဟုတ် သွေးထဲမှာနီကိုတင်းတွေ့မလားဆိုပြီး လန့်နေပါတယ်။ သူ့အရင်တစ်ခါ ချောင်းဆိုးတော့ ဆရာဝန်တွေကစစ်တော့ အဆုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောတယ်။ သွေးပဲစစ်တယ်။...